a fella | 03/10/2020 | News | No Comments
[ ဘာမှဆို ဖြစ်လာနိုင်သော ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး ]
– တရုတ် Attack အောင်မြင်ပြီလား ?
– US မှာ ကာကွယ်ဆေး မရှိသေးဘူး ?
– ထရန့် လှည့်ကွက်လား ?
– တရုတ်ကို ဗျင်းတော့မှာလား ?
– တရုတ်လက်တံ ဒီမိုကရက်တစ် လက်ချက်လား ?
– ထရန့်ကျရင် ဘာဆက်ဖြစ်လာအုံးမလဲ ?
– ရွေးကောက် ရွေ့ဖို့ လှည့်ကွက်လား ?
– တရုတ်ကြီး ပျော်နေပြီလား ?
ဆိုတဲ့ အသံတွေရဲ့ အမေးတွေရဲ့နောက်မှာ ပဟေဠိ အဖြေနဲ့ ကွင်းဆက်လေးတွေ ဆက်ဆက်မှုနဲ့ အဖြေကို ရှာ သူံးသပ်ကြည့်ရရင်
အကယ်၍ တရုတ်က ထရန့်ကို ဖြုတ်ချဖို့ ယခုလို attack လုပ်မယ် လုပ်လို့ အောင်မြင်တယ်ဆိုရင်တောင် သူပြန်ရမည့် feedback လားရာက စစ်ပွဲကလွဲ အခြားမရှိနိုင်တော့ ဒါကို သူပြန်လက်ခံပြီး ရင်းရဲ လုပ်ရဲပါ့မလားဆိုတာပါပဲ_ဆိုတာကို တွေးဆ တွက်ဆ ကြည့်ရပါမယ်
ဒါကြောင့် အကယ်၍ ထရန့် ပိုးကြောင့် ရှောသွားလို့ သူ့နိုင်ငံရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်က စစ်ရေးဘက်မလှည့်ဘူးဆိုရင် တရုတ်အနိုင်နဲ့ အောင်မြင်တယ် ပြောရမယ်
ထိုသို့မဟုတ်ပဲ ထရန့်ပြန်ကောင်းလာရင်တော့ ၈၀% တရုတ်ကို ဗျင်းဖို့ သေချာပြီဟု ယတိပြတ် ပြောနိုင်တယ်
US ဟာ ကာကွယ်ဆေး ငါးမျိုးအထိ စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်နေတယ်ဆိုပေမယ့် အောင်မြင်တဲ့ဆေး ထုတ်လုပ် ရောင်းချဖို့အထိ ခုထိ သေချာပေါက် ထုတ်နိုင် ရှိနိုင်လားဆိုတာ ခုထိ မည်သူမျှ သေချာ မသိနိုင်ကြသေးပါဘူး
ဒါဟာ တကယ်ပဲလား နိုင်ငံရေးအရ လျို့ဝှက်လုပ်ဆောင် ကစားနေသလားဆိုတာ US အစိုးရကိုယ်တိုင်နဲ့ ထရန့်တို့မှ သေချာပေါက် အတိကျ သိမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ထရန့်သာပိုးထိခဲ့တာ အမှန်ဖြစ်ပြီး ပြန်ကျန်းမာလာရင် ဆေးရှိလို့ဟု မှတ်ယူနိုင်သလို ထိုဆေး ဘာကြောင့် မထုတ်သေးတာလဲဆိုတာတော့ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက် ဆက်နွယ်နေလိမ့်မည်ဟု ထင်မိတယ် သို့ပေမယ့် ထိုဆေးကို US က Jun 1ရက်နေ့မှ ထုတ်မည်ဟု ‌ကြေငြာထားပါတယ်
ဒါ့အပြင် ယခုလုပ်ရက်ဟာ ထရန့်ကိုဖြုတ်ချဖို့ ဆော်ဖို့ တရုတ်နဲ့ သူ့လက်တံ ဒီမိုကရက်တစ်လက်ချက်လားဆို
လုပ်ကြံရင်‌တော့ သေချာပေါက် သူတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ပြောလို့ရပြီး ဘိုင်ဒန်အတွက် လုပ်‌ဆောင်သည်ဟု ပြောလို့ရသလို ဒါဟာ ထရန့်ကို ဖြုတ်ချတဲ့ အကွက်ဟု သက်မှတ်လို့ရပါတယ်တရုတ်ကြီးပျော်နေပြီလားဆို
ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ စောင့်ကြည့်နေရမှာ ဖြစ်သလို ထရန့် ရှောဖို့ ဆုတောင်းနေရုံမှအပ ပြန်ကောင်းလာပြီဆို ထရုတ်မလွယ်တော့ဘူးဟု ပြောပါရစေ
ယခု ပထမ ဒီဘိတ်မှာ ထရန့်ရော ဘိုင်ဒန်ရော mask မတပ်ပါဘူး ဒီ‌တော့ ထရန့်ကူးရင် ဘိုင်ဒန်ပါ ကူးနိုင်ပါတယ်
အကယ်၍ ဘိုင်ဒန်က ထရန့်ကို လုပ်ကြံတယ်ဆိုရင် သူလည်း ပိုးထိ နိုင်ပါသေးတယ် အကယ်၍ မထိဘူးထား ထရန့် ပြန်ကောင်းလာရင် ဘိုင်ဒန်အတွက် မလွယ်ကူပါဘူး
သို့မဟုတ် အကယ်၍ ထရန့်က ရွေးကောက်ရှုံးမှာကြောက်လို့ ပိုးကူးယောင်ဆောင် လှည့်ကွက်လုပ်တာဆိုရင် ဒါဟာ ရွေးကောက်ရွေ့ဖို့ ကြံစည်တာဆိုရင်
ဒါဆိုရင် ထရန့်ဟာ သေချာပေါက်ကို စစ်ပွဲဆီကို သွားမှ ရတော့မှာပါ
ဘာကြောင့်ဆိုတော့ ဒီလို လုပ်မှာ ရွေးကောက်ရော တရုတ်ရော သူအောင်မြင်မှာ ဖြစ်တယ် မဟုတ်ရင် သူကျရှုံးပြီး သမ္မတဆက်မဖြစ်တဲ့အပြင် ကမ္ဘာတိုက်ပွဲအတွက် တရုတ်ကို သူလက်လွှတ် အရှုံးပေး လိုက်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်
ဒါ့အပြင် ယခုကေ့ဟာ ထရန့်ဗိုင်းရက်ကူးစက်မှု မှန်ကန်ပြီး တခုခုဖြစ်ခဲ့ရင် သို့ ပြန်ကျန်းမာလာရင်လည်း
အမေရိကန်သမ္မတ ထရန့်ကို လုပ်ကြံမှု အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ လုံခြုံရေးကို ထိပါး တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး စစ်ရေးအရ အရေးယူလို့ ရပါကြောင်း အသိပေးရင်း
ဘာဆက်ဖြစ်လာမလဲဆို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး မျက်လှည့်ဆရာကြီး ထရန့်ရဲ့ ပြကွက် အသစ်ဆန်းတွေကို စောင့်မျော်ကြည့်ရင်း
တရုတ်မှ ရှေးဟောင်းစစ်သည် အရုပ်တွေကို မှော်အတတ်ပညာသွင်းရင်း စောင့်မျှော်နေကြောင်း သတင်းကောင်းပါးပါရစေ ! ။
မူရင်းရေးသားသူ ဆရာ မင်းကြည်ညိုနေ အားလေးလေးစားစား ခရက်ဒက်ပေးပါသည်။
ကမ်ဘာ့နိုငျငံရေး မကျြလှညျ့ဆရာ ထရနျ့ (သို့) ရှေးဟောငျး စဈသညျတျောတှကေို မှျောအတကျ သှငျးနသေော တရုတျ
[ ဘာမှဆို ဖွဈလာနိုငျသော ကမ်ဘာ့နိုငျငံရေး ]
– တရုတျ Attack အောငျမွငျပွီလား ?
– US မှာ ကာကှယျဆေး မရှိသေးဘူး ?
– ထရနျ့ လှညျ့ကှကျလား ?
– တရုတျကို ဗငျြးတော့မှာလား ?
– တရုတျလကျတံ ဒီမိုကရကျတဈ လကျခကျြလား ?
– ထရနျ့ကရြငျ ဘာဆကျဖွဈလာအုံးမလဲ ?
– ရှေးကောကျ ရှဖေို့ လှညျ့ကှကျလား ?
– တရုတျကွီး ပြျောနပွေီလား ?
ဆိုတဲ့ အသံတှရေဲ့ အမေးတှရေဲ့နောကျမှာ ပဟဠေိ အဖွနေဲ့ ကှငျးဆကျလေးတှေ ဆကျဆကျမှုနဲ့ အဖွကေို ရှာ သူံးသပျကွညျ့ရရငျ
အကယျ၍ တရုတျက ထရနျ့ကို ဖွုတျခဖြို့ ယခုလို attack လုပျမယျ လုပျလို့ အောငျမွငျတယျဆိုရငျတောငျ သူပွနျရမညျ့ feedback လားရာက စဈပှဲကလှဲ အခွားမရှိနိုငျတော့ ဒါကို သူပွနျလကျခံပွီး ရငျးရဲ လုပျရဲပါ့မလားဆိုတာပါပဲ_ဆိုတာကို တှေးဆ တှကျဆ ကွညျ့ရပါမယျ
ဒါကွောငျ့ အကယျ၍ ထရနျ့ ပိုးကွောငျ့ ရှောသှားလို့ သူ့နိုငျငံရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြက စဈရေးဘကျမလှညျ့ဘူးဆိုရငျ တရုတျအနိုငျနဲ့ အောငျမွငျတယျ ပွောရမယျ
ထိုသို့မဟုတျပဲ ထရနျ့ပွနျကောငျးလာရငျတော့ ၈၀% တရုတျကို ဗငျြးဖို့ သခြောပွီဟု ယတိပွတျ ပွောနိုငျတယျ
US ဟာ ကာကှယျဆေး ငါးမြိုးအထိ စမျးသပျထုတျလုပျနတေယျဆိုပမေယျ့ အောငျမွငျတဲ့ဆေး ထုတျလုပျ ရောငျးခဖြို့အထိ ခုထိ သခြောပေါကျ ထုတျနိုငျ ရှိနိုငျလားဆိုတာ ခုထိ မညျသူမြှ သခြော မသိနိုငျကွသေးပါဘူး
ဒါဟာ တကယျပဲလား နိုငျငံရေးအရ လြို့ဝှကျလုပျဆောငျ ကစားနသေလားဆိုတာ US အစိုးရကိုယျတိုငျနဲ့ ထရနျ့တို့မှ သခြောပေါကျ အတိကြ သိမှာဖွဈတဲ့အတှကျ ထရနျ့သာပိုးထိခဲ့တာ အမှနျဖွဈပွီး ပွနျကနျြးမာလာရငျ ဆေးရှိလို့ဟု မှတျယူနိုငျသလို ထိုဆေး ဘာကွောငျ့ မထုတျသေးတာလဲဆိုတာတော့ နိုငျငံရေးနဲ့ ပတျသကျ ဆကျနှယျနလေိမျ့မညျဟု ထငျမိတယျ သို့ပမေယျ့ ထိုဆေးကို US က Jun 1ရကျနမှေ့ ထုတျမညျဟု ‌ကွငွောထားပါတယျ
ဒါ့အပွငျ ယခုလုပျရကျဟာ ထရနျ့ကိုဖွုတျခဖြို့ ဆျောဖို့ တရုတျနဲ့ သူ့လကျတံ ဒီမိုကရကျတဈလကျခကျြလားဆို
လုပျကွံရငျ‌တော့ သခြောပေါကျ သူတို့ကွောငျ့ ဖွဈသညျဟု ပွောလို့ရပွီး ဘိုငျဒနျအတှကျ လုပျ‌ဆောငျသညျဟု ပွောလို့ရသလို ဒါဟာ ထရနျ့ကို ဖွုတျခတြဲ့ အကှကျဟု သကျမှတျလို့ရပါတယျ
ရငျတထိတျထိတျနဲ့ စောငျ့ကွညျ့နရေမှာ ဖွဈသလို ထရနျ့ ရှောဖို့ ဆုတောငျးနရေုံမှအပ ပွနျကောငျးလာပွီဆို ထရုတျမလှယျတော့ဘူးဟု ပွောပါရစေ
ယခု ပထမ ဒီဘိတျမှာ ထရနျ့ရော ဘိုငျဒနျရော mask မတပျပါဘူး ဒီ‌တော့ ထရနျ့ကူးရငျ ဘိုငျဒနျပါ ကူးနိုငျပါတယျ
အကယျ၍ ဘိုငျဒနျက ထရနျ့ကို လုပျကွံတယျဆိုရငျ သူလညျး ပိုးထိ နိုငျပါသေးတယျ အကယျ၍ မထိဘူးထား ထရနျ့ ပွနျကောငျးလာရငျ ဘိုငျဒနျအတှကျ မလှယျကူပါဘူး
သို့မဟုတျ အကယျ၍ ထရနျ့က ရှေးကောကျရှုံးမှာကွောကျလို့ ပိုးကူးယောငျဆောငျ လှညျ့ကှကျလုပျတာဆိုရငျ ဒါဟာ ရှေးကောကျရှဖေို့ ကွံစညျတာဆိုရငျ
ဒါဆိုရငျ ထရနျ့ဟာ သခြောပေါကျကို စဈပှဲဆီကို သှားမှ ရတော့မှာပါ
ဘာကွောငျ့ဆိုတော့ ဒီလို လုပျမှာ ရှေးကောကျရော တရုတျရော သူအောငျမွငျမှာ ဖွဈတယျ မဟုတျရငျ သူကရြှုံးပွီး သမ်မတဆကျမဖွဈတဲ့အပွငျ ကမ်ဘာတိုကျပှဲအတှကျ တရုတျကို သူလကျလှတျ အရှုံးပေး လိုကျရတော့မှာ ဖွဈပါတယျ
ဒါ့အပွငျ ယခုကဟေ့ာ ထရနျ့ဗိုငျးရကျကူးစကျမှု မှနျကနျပွီး တခုခုဖွဈခဲ့ရငျ သို့ ပွနျကနျြးမာလာရငျလညျး
အမရေိကနျသမ်မတ ထရနျ့ကို လုပျကွံမှု အမရေိကနျနိုငျငံရဲ့ လုံခွုံရေးကို ထိပါး တိုကျခိုကျမှုနဲ့ ခေါငျးစဉျတပျပွီး စဈရေးအရ အရေးယူလို့ ရပါကွောငျး အသိပေးရငျး
ဘာဆကျဖွဈလာမလဲဆို ကမ်ဘာ့နိုငျငံရေး မကျြလှညျ့ဆရာကွီး ထရနျ့ရဲ့ ပွကှကျ အသဈဆနျးတှကေို စောငျ့မြျောကွညျ့ရငျး
တရုတျမှ ရှေးဟောငျးစဈသညျ အရုပျတှကေို မှျောအတတျပညာသှငျးရငျး စောငျ့မြှျောနကွေောငျး သတငျးကောငျးပါးပါရစေ ! ။
[ သုံးသပျမှု အနဖွေငျ့သာ ]
မူရငျးရေးသားသူ ဆရာ မငျးကွညျညိုနေ အားလေးလေးစားစား ခရကျဒကျပေးပါသညျ။
အဇာဘိုင်ဂျန် Vs အာမေးနီးယား စစ်ပွဲက သက်သေပြနေတဲ့ ခေတ်သစ် စစ်တိုက်နည်း ….(ခြင်းကြား အန်းတိတ် နည်းဗျူဟာတိုက်စစ်လောက်နဲ့မရတော့ပါ ဘူး မောင်းသူမဲ့ဒရုန်းနဲ့ဒုံးတွေ က မိမိတို့ခေါင်းပေါ်အရင်ကျလာပြီးအာဇာနည် စန်း စန်းတွေဖြစ်ကုန်မှာပါ……)
တရုတ်ကိုချောင်ပိတ်ရိုက်မယ့် ထရန့်ရဲ့ ငါးမရ,ရင်တောင် ရေချိုးပြန်တတ်တဲ့တဇွတ်ထိုးအကျင့်ကြောင့် ချည်မန်းကွင်းတောင် မကျန်လောက်မယ့် သာကောဘဝ
ဘိုရင်းကုမ္ပဏီထံမှ Insitu RQ-21 Blackjack ( မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် ) များမှာယူထားသော တော်ဝင်ထိုင်းရေတပ် ( ထိုင်းဟာ Insitu RQ-21 Blackjackကို အင်ဒို-ပစိဖိတ်ဒေသတွင်းမှာ ပထမဆုံးအသုံးပြုနိုင်တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်လာမှာပါ….)